Meghan Markle anonzi ainzi princess pachirongwa chekuberekwa kweAchie - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Meghan Markle zvakadanwa zita rokuti princess paChipiri chekuberekwa kweChicheche
Mwanakomana weDuchess yeSussex, Archie Harrison akaberekwa, asi chizvarwa chake chakaitwa pachena. asi nhasi. Tsamba iyi, kubva kuWestminster Registrar, inopa tsanangudzo isingazivikanwe pamusoro pokuberekwa kwemudiki mambo uye "hurumende" yeMeghan. Mutsamba, duchesi yakamupa zita rokuti "Rachel Meghan Her Royal Highness Duchess of Sussex" uye akanyora basa rake se "Princess of the United Kingdom".
Meghan, aimbova mutevedzeri uyo akatarisa mumitambo yakawanda yeAmerica mafirimu eTV, akaberekwa naRaan Meghan Markle, asi ave achida kuzivikanwa se Meghan Markle .
Kunyange Buckingham Palace, ichizivisa kusabatanidzwa kwake naHanry Harry, inomudana iye Mai Meghan Markle pane Rachel Meghan.
Chikwangwani chekuberekwa chinoratidza zvakare kuti Meghan akatumira mwana wake muPortland Hospital inofadza, iyo yakasarudzwa munguva yakapfuura naSara Ferguson naVictoria Beckam, pakati peimwe nyeredzi dzakawanda.
Meghan Markle akagamuchira zita re "princess" kubva pakuberekwa kwechicheche checheche Archie (Mufananidzo: GETTY)
Chikwangwani chekuberekwa kwaArkie Harrison Mountbatten-Windsor (Image: PA)  Kuberekwa kwaArie kwakanyorwa naHanry Harry musi weChishanu
Mutongi uye Duchess of Sussex vakachengetedza huwandu hwemashoko pamusoro pokuberekwa kwevana vavo vemangwe mumazuva apfuura.
Archie akaberekwa pa 5h26 mangwanani mangwanani 11 mazuva apfuura, asi Buckingham Palace yakashuma kuti Meghan akanga atanga basa masikati. Akaratidza hafu yeawa gare gare kuti mwana akanga aberekwa maawa apfuura uye akanga atotorwa kuSussex muWestern.
Mutungamiri Harry ter akati Archie "akambomira zvishoma", achifunga kuti Meghan akanga amusiya zvirongwa zvokuberekwa uye akasarudza kuenda kuchipatara.
ONA ZVAKAWANDA ZVINOTEVERA
Ihotera ye (guru) vanyori veFrench Riviera